HIRQINFUU (HICCUPS)!- SAAYINSIIFI WALALOON yeroo WALIIN TUMSAMAN-Dr. Dhiinsaa Yoonaasiin – Beekan Guluma Erena
HIRQINFUU (HICCUPS)!- SAAYINSIIFI WALALOON yeroo WALIIN TUMSAMAN-Dr. Dhiinsaa Yoonaasiin	Beekan Erena
Poems May 21, 2016
Hirqinfuun kan inni namatti dhufu, maashaan ‘Diyaafiramii’ jedhamu, kan gola qomaa fi garaa addaan hiru, akka tasaa yeroo inni qoncoorratu, qilleensi gara sombaatti seenu ribuu sagalee sochoosuun kan uumamudha.
Maaltu hirqinfuu fida?
1. Dafanii dafanii nyaachuu, baay’inaan nyaachuu ykn dhuguu
2. Dhibeewwan ‘Narvii’ maashaa diyaafiramii kan huban
3. Baqaqsanii yaaluu garaa irratti godhamu (abdominal surgery)
4. Dhibee qaama laamshessu (stroke)
5. Dhibee sammuu keessatti biqilu (brain tumors)
6. Foolii fi qoricha garaa garaa fi kkf
Hirqinfuun baay’inaan yeroo muraasa qofaaf kan nama irra turu yeroo ta’u, tarkaanfiiwwaan fudhatamuu qaban armaan gadiis akka hirqinfuun dhaabbatuuf nii gargaara:
1. Hafuura keenya utuu gadi hin baasin qabannee turuu,
2. Bishaan dafanii dhuguu,
3. Arraba gara alaatti dhiibanii turuu,
Haalotni armaan gadii immoo yoo jiraatan:-
1. Yoo hirqinfuun sa’atii sadii (3) gararraadhaaf nama irra ture,
2. Yoo nyaataa fi rafuu, akkasumas hojii keenya guyyaa guyyaatti hojjennu irratti dhiibbaa fida ta’e, ogeessa fayyaa bira deemuun yaalii argachuun barbaachisaadha. Qorichoonni fudhatamanis:- chlorpromazine (Thorazine), Haloperidol (haldol), fi Metoclopramide (Reglan) jedhamuun beekamu.
Haalota hirqinfuu nutti fidan kan armaan olitti ilaalle (dafanii dafanii nyaachuu, baay’inaan nyaachuu yookiin dhuguu) irraa of qusachuun hirqinfuu of-irraa ittisuun nii danda’ama.
Yeroo hirqinfuun nutti dhufu, barsiifatni jiru, namni nuti jaal’annu yookiin firri keenya nurraa fagoo jiru waan maqaa keenya kaasee dubbateefi jenneetu amanna. Hirqinfuu sanas of irraa dhaabuuf “Abaluu, ishee ykn isa” jechuun maqaa nama tokkoo al sadii (3) ykn isaa olis nii waamna. Kun egaa barsiifata hirqinfuu irratti jirudha.
Garaa koo irraa ka’ee
Achii ol na tuqata,
Somba irraa baqata,
Bishaan itti dhugee
Tasa homaa didee,
Qoma koo na wargee
Fala natti fidee!
Hafuura of luugamee
Hirqinfuun naaf gamee
Falasaa naaf himaa!
Kokkeen na dhahata laagaan addaan bahee ,
Ka’een maqaa waama yoo furmaata tahe,
Eenyuudha immoo laata kan maqaa na dhahe??
← NATTI TOLA TURE- Oroliyana Daniel
YUUSUU DIDEE CALLISE-Daawwitee T →